Golaha Shacabka oo markii ugu horeysay kulmaya sanadkan cusub ee 2019-ka – Kalfadhi
Kulanka 33-aad ee Golaha Shacabka ayey maanta Xildhibaannada golahaas ku leeyihiin xaruntooda Muqdisho. Waxa uu soo baaqday ugu yaraan 7 maalin, oo ay ahayd inuu dhaco kulankaas. Kulanka golaha ee maanta waxaa, sida uu baahiyey Xafiiska Warfaafinta ee Golaha, uu yahay ajandihiisa iney Xildhibaannadu u codeeyaan Hindisaha Xeerka Hanti-dhawrka Qaranka iyo iney dib-u-eegis ku sameeyaan Xeerka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Golaha Shacabka waxaa horyaala, oo mar sii horeysay la horkeenay, hindisayaal fara badan, hase ahaatee inta badan kulamadiisa ma dhacin Kalfadhigan 4-aad. In ka badan kala baroo bar kulamadii ay ahayd inuu yeesho ayuusan qabsan Kalfadhigan. Balse, waxa uu Guddoomiyaga Golaha, Maxamed Mursal, ku doodayaa iney Kalfadhigan 4-aad aad uga shaqa badnaayeen Kalfadhiyadii hore.
“kalfadhigaan afaraad waa kii ugu shaqadda badnaa, waayo waxaan meel marinay ilaa 4 sharci oo dalka muhiim u ah, halka sadaxdii kalfadhi ee ka horaysay aan meel marinay 3 sharci” ayuu Guddoomiye Mursal ka yiri kukankii 31-aad ee golaha (30/12/2018). Balse, Madaxweynaha dalka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay inuu 2-dii sano ee ay dowladdiisu jirtay uu saxiixay 2 sharci oo kaliya. “Sanadkii la soo dhaafay iyo sanadkan laba sharci bis ayaan saxiixay, waxaana sugeynay intaas iyo in ka badan” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Sida uu Madaxweynuhu sheegay waxaa Baarlamaanka Soomaaliya ag yaala 29 Hindise Sharciyeed, oo uu codsaday iney dedejiyaan meel-marintooda, si uu u saxiixo. “Waxaan ka codsanayaa Golaha Shacabka ee sharafta leh iyo Golaha Aqalka Sare in inta hartay ay si dhaqsiya iigu soo gudbiyaan, oo uu ugu horeeyo (Hindisaha Xeerka) Xaqsiinta Ciidanka Qalabka Sida” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo